သတင်းနှင့်ဓာတ်ပုံ- မမ(လားရှိုး) သို့…..ပေးစာတစ်စောင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » သတင်းနှင့်ဓာတ်ပုံ- မမ(လားရှိုး) သို့…..ပေးစာတစ်စောင်
သတင်းနှင့်ဓာတ်ပုံ- မမ(လားရှိုး) သို့…..ပေးစာတစ်စောင်
Posted by Ma Ei on Jan 22, 2013 in Creative Writing, My Dear Diary | 50 comments
အလစ်သုတ်ခြင်းခံရသော မက်မန်းသီး တစ်ပန်းကန်
တနင်္လာ၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၁၊ ၂၀၁၃ နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာ စာမျက်နှာ ၁၀ ပြည်တွင်းသတင်း ကဏ္ဍမှာ
ပြည်ပပို့ကုန်အမယ်သစ်တစ်မျိုးဖြစ်လာနိုင်သည့် တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မက်မန်းသီးလုပ်ငန်း ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ပြင်ဦးလွင်မြို့၏
အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သော မက်မန်းသီးလုပ်ငန်းအကြောင်း သတင်းအဖြစ်တင်ပြထားပါတယ်။
မက်မန်းသီးလုပ်ငန်းအကြောင်းကို အပင်မှစ၍ စိုက်ပျိုးရာဒေသ၊ စိုက်ပျိုးပုံ အသီးဆွတ်ခူး ဈေးကွက်တင်ပို့သည်ထိ
စိုက်ပျိုးသူ၊ အ၀ယ်တော်၊ ကုန်ကြမ်းလုပ်ကိုင်သူ၊ စသည်ဖြင့် မေးမြန်းရေးသားထားသည်ကိုဖတ်ရှုရခဲ့ပါသည်။
မိသားစုတစ်ပိုင်တစ်နိုင် လုပ်ကိုင်နိုင်သည့် စီးပွားရေးဖြစ်သည့်အတွက်ဆင်းရဲမှုလျှော့ချနိုင်သော အခွင့်အလမ်းများဖြစ်ပြီး ၀င်ငွေရစေနိုင်ပေသည့်မက်မန်းသီးလုပ်ငန်းကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် လုပ်ကိုင်ကြမည်ဆိုလျှင် မက်မန်းဝိုင်သည် မြန်မာပြည်၏ တင်ပို့ကုန် အမယ်သစ် ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း သတင်းနှင့်ဓာတ်ပုံ- မမ(လားရှိုး) ကရေးသားထားပါတယ်။
ပြောချင်တာက သတင်းနှင့်အတူ တင်ပြထားတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးပါ ။
သတင်းနှင့် ဓာတ်ပုံလို့ ရေးထားတဲ့အကြောင်းလေးပါ။
မက်မန်းသီး တစ်ပန်းကန်ပုံသည် မမ(လားရှိုး) ဆိုသူ ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးသော ဓာတ်ပုံဖြစ်ပါသည်လား ။
သတင်းကို ကိုယ်တိုင်မေးမြန်းရေးသားသကဲ့သို့ ဓာတ်ပုံကိုလည်း ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးတင်ပြမှသာ သတင်းနှင့် ဓာတ်ပုံ ဟု ရေးသားရပါမည်။
ယခု သတင်းပါ မက်မန်းသီး တစ်ပန်းကန် ဓာတ်ပုံသည် ကျမတို့မိသားစု ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း အလည်သွားခဲ့စဉ်က ကလောဘူတာ အနီးခြံထဲမှ ခူးလာခဲ့သောမက်မန်းသီးများကို( Winner Hotel မှာ ပန်းကန်ထဲထည့်ပြီး ) ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်။မန်းဂဇက်တွင် ချိုသော မက်မန်းသီးများနှင့် ကလောမြို့ အမည်ဖြင့် ပိုစ့် တင်ခဲ့ပါတယ်။
မအိ ရဲ့ မက်မန်းသီး တစ်ပန်းကန်ပါ…
သတင်းဓာတ်ပုံ- မမ(လားရှိုး) ပါတဲ့…
နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာတွင်ဖော်ပြခြင်းခံရသော သတင်းရေးသားသူတစ်ဦးအနေဖြင့် ယခုကဲ့သို့ မလုပ်သင့်ကြောင်း ပြောကြားချင်ပါတယ်။ အင်တာနက်မှာ ဓာတ်ပုံမျိုးစုံရှိပါတယ်။ကူးယူလို့လဲရပါတယ်။ဒါပေမယ့် စီးပွားဖြစ်သုံးခွင့်မရှိပါဘူး။
ခွင့်ပြုချက်တောင်းရပါမယ်။ မသိတော့ရင်တောင် အချို့ဂျာနယ်မှာ ပါသလို ဓာတ်ပုံ အင်တာနက် လို့ ရေးရင်တော်သေး…….
အမှန်က ဓာတ်ပုံ မန်းဂဇက် လို့ရေးရပါမယ်။
ခုတော့ သူများပုံကို နေ့စွဲဖျက်ထည့်လိုက်ပြီး သတင်းနှင့်ဓာတ်ပုံ- မမ(လားရှိုး) တဲ့လား…..
အဲဒါ ဗြောင်ချည်း မ တာ ….
ရှက်တတ်ရင် တော်တော်ရှက်ဖို့ ကောင်းပါတယ် ..
စာပို့လိုက်တာ ကောင်းပါတယ် … အဲဒါမှလဲ နောက်ဆိုရင် copyright ကိစ္စ လူတွေ သတိထားမိလာလိမ့်မယ် … မြန်မာပြည်မှာက အလွယ်တကူ ယူသုံးတာကို ရှက်စရာလို့ မထင်သေးဘူးလေ … အဲဒါကို ရှက်စရာမှန်းသိအောင် ပညာပေးတဲ့အနေနဲ့ စာပို့အကြောင်းကြားသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ် …
မက်မန်းသီး ပန်းကန်လေး ဓာတ်ပုံက
သွားကြားထိုးတံလေးတောင် သက်သေအဖြစ် ပါသေး……
အဲဒီ စာရေးသူ မမ က မန်းဂဇတ်ကိုလည်း ဖတ်သူဖြစ်မှာပေါ့..
မွန်ကစ်ပြောတာ ဒီရွာသူ မမ ကို မဟုတ်ဘူးနော်…
ဒီလိုကိုယ်တိုင်ရိုက်ထားသလိုမျိုးတော့ လုံးဝ (လုံးဝ) မလုပ်သင့်ဘူးနော်….
ဒီမက်မန်းသီးပန်းကန်လေးကို မှတ်မှတ်ရရကို မှတ်မိနေပါတယ်…
အမအိ အဲဒီပို့စ်တုန်းက စားချင်စရာကောင်းလို့တောင် မန့်ဖြစ်လိုက်သေးတယ်…
ဒါမျိုးကတော့ မခံနဲ့ သတင်းစာတိုက်ကို စာပို့ပြီးကန့်ကွက်ပါ
သတင်းဓာတ်ပုံ- မမ(လားရှိုး) ဆိုတဲ့သူကို တောင်းပန်းခိုင်ပါ
ဂျာနယ်တွေ ထက် သတင်းစာ ဆိုတာ နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် နိုင်ငံတော် ကိုယ်စားပြုတောင် ဖြစ်တယ်.. နိုင်ငံကိုယ်စားပြု ဖြစ်တဲ့ သတင်းစာမှာတော့ အဲ့လို ခိုးယူတာတော့ မဖြစ်သင့်ဘူး။
ခပ်တည်တည်နဲ့ ခိုးယူပြီး ထည့်လိုက်တဲ့ အတွက် ထောက်ပြသူသာ မရှိတော့ဘူး ဆိုရင် အဲ့ဒီ ပုံရဲ့ ပိုင်ရှင်က သတင်းရေးသူ ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
အတုက အစစ်ဖြစ် အစစ်က အတု ဖြစ် သွားပြန်တော့ မပေါ့.. ဒါမျိုးတွေကို လူများများ သိအောင် ပြောသင့်တယ်။
ဖေ့ဘွတ်မှာ ဆိုလို့ကတော့ သူငယ်ချင်းတွေ အကုန် လိုက် ရှဲခိုင်းပစ်တယ်။
ခက်တယ် အာဂျီး ခက်တယ်ကွာ
သတင်းစာကို ဆက်သွယ်ပြီး ပြောသာပြောပါဗျာ…
မမှန်တာကို မမှန်ဘူး။ ခိုးယူတာကို ခိုးယူတယ်
လိမ်လည်တာကို လိမ်လည်တယ် ပြောဖို့ အတွက်ကတော့ဖြင့်
၂ခါပြန်စဉ်းစားစရာ မလိုသော ကိစ္စ ဖြစ်ပါကြောင်းဗျို့…။
ဓတ်ပုံတောင် ချမ်းသာမပေးပဲ ခိုးနေပါလား
သတင်းစာဖတ်တဲ့ သူမို့ တော်သေးတယ်
ကျုပ်တို့ ဆို သိလိုက်မှာတောင်မဟုတ်ဘူး
ဒီသတင်းထောက်ကို ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူသင့် တယ်
သတင်းစာတိုက်ရဲ့  ဂုဏ်သရေကို ညှိုးနွမ်းစေလို့ ပါ ။
ပုံတောင် ခိုးသုံးတယ်ဆိုရင် စာတွေကရော သူရေးတာဟုတ်နိုင်ပါ့ မလား …???????
ဂဇက်ကို သံပရာသီးများအောက်မေ့ နေလားမသိ ……
အခုကိတ်စက တနည်းအားဖြင့် နန်းခင်ဇေယျာ ဖြစ်သလို ဖြစ်နေပါပီ….
ဟိုတယောက်ကတော့ Public မှာ အရိုက်ခံထားတဲ့ပုံကို ဟိုမဂ္ဂဇင်းက ယူသုံးလိုက်တော့……
လူသိထင်ရှား ကန့် ကွက် လိုက်ပါသတဲ့…..
နောက်ပိုင်း ဘာဆက်ဖြစ်လဲတော့ မသိဖူး သိသူများရှိရင် ပြောကြပါအုံး……
အခု မအိ ကိစ္စလည်း အဲ့ဂလိုပါပဲ……. သွားပီး ကန့် ကွက်ရင်ကော ထူးမယ်မထင်ပါဖူး……
ဟုတ်တယ်လေ… တို့ယူသုံးလိုက်တယ်…. ပုံလေးနဲ့စာလေးနဲ့ က ကိုက်လို့ ….. စကားမစပ် အဲ့ဒါ မင်းရိုက်ထားတဲ့ ပုံလားဟင်လို့ …..
ဟိုက ဗြောင်ကြီးအခုလို ပြောလိုက်ရင် ဒေါသထွက်တာပဲ အဖတ်တင်မှာ ကျိန်းသေပါတယ်…..
ပြောသာပြောရတာ ကိုယ်ကလည်း စာပေစိစစ်ရေးနဲ့ပုံတွေရဲ့ မူပိုင်ခွင့်ကို အတိအကျ နားမလည်ပါဖူး……
အလွန်ဆုံး ဖြစ်နိုင်ချေကတော့ နောက်တရက် သတင်းစာမှ အမှားပြင်ဆင်ချက်ဆိုပီးပါလာယုံပါပဲ….
ဒီလိုရှိမယ် ထင်တယ် ကိုရင်တိမ်မည်းရေ
အကျိုးအမြတ်အားဖြင့် မဖြစ်လောက်ဘူးလို့ ထင်စရာရှိပေမဲ့ 
အားနာလို့လိုက်လျောတာကိုအတယ်လို့မထင်စေချင်တာပါ ။ကျုပ်တို့ 
နိုင်ငံကလူတွေဟာ သည်းခံတတ်တာလား ဒါမှမဟုတ် အလုပ်ရှုပ်မခံချင်တာလားမသိ
တော်တော်လးကို ရုံးပြင်ကနားကြောက်ကြတယ် ဒါကြောင့်သက်သေ
အမှန်မရတတ်ပဲ တချို့ သောအမှုမှန်တွေ နစ်နာခဲ့ ရပါတယ် ။
ပြီးတော့ ဒီနိုင်ငံမှာမူပိုင်ခွင့် ဥပဒေကလည်း အသက်မဝင်တော့ 
လစ်ရင်လစ်သလို လုပ်တတ်ကြပါတယ် ။
တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှာ သိပ်ပြီးမသက်ရောက်နိုင်ပေမဲ အကြိမ်ကြိမ်ဆိုရင်
ပြောရတာ အပန်းမကြီးတာမို့ဘာမှမထူးလည်း ပြောစရာရှိတာပြောသင့် ပါတယ်
ခိုးတဲ့ သူတောင် ကြိုးစားပမ်းစားခိုးသေးတာမို့……….
ကျွန်တော်လည်း မလုပ်ပါနဲ့ လို့တားတာမဟုတ်ပါဖူး…..
ပြောပါ… တိုင်ပါ…… ဒါ မအိကိစ္စပါ…. MG ကိစ္စပါ….
ကျွန်တော်ကတော့ အဝေးမှာ ရောက်နေတာကတကြောင်း….
အခုလိုတွက်ပြယုံကလွဲလို့မတက်နိုင်ပါဖူး……
ဖြစ်နိုင်ခြေလေးတခုကို ဆိုးဖတ်မြင်ကနေ ကြိုတွက်ပြတာပါ…..
ဒီထက် ဆိုးတာလေးတွေ ရှိပါသေးတယ်…. အဲ့ဒါတော့မပြောတော့ပါဖူး……
အားနာလို့အားပါသွားတာနဲ့ …
မအားလို့မပြောမိတာနဲ့ ……
ရုံးပြင်မသွားချင်လို့မပြောဖြစ်တာနဲ့ ….
အလုပ်ရှပ်မှာကြောက်လို့မပြောပဲနေတာနဲ့ …..
အဖတ်မတန်လို့မပြောတာနဲ့ …..
ဥပဒေကတော့ သိနားလည်သူများ ပို့ စ်တခုအနေနဲ့ရေးပြရင်သော်လည်းကောင်း….
reference links လေးများ ပြရင်သော်လည်းကောင်း…..
အခုပဲ နားလည်ချင်လို့လိုက်ဖတ်နေပါတယ်…..
ရှာမတွေ့ လို့ ပါ….. ကူကြပါအုံးနော်….
ဒါခိုးတာပါပဲ… လိပ်ပြာသန့်သန့်နဲ့လုပ်ရဲတာ အတော်အံ့သြဖို့ကောင်းပါတယ်…
ပြောရမယ်ဆိုရင် ဒီသတင်းစာတိုက်ဆိုတာကလဲ ယုံကြည်စိတ်ချ ရတဲ့ good reputation ရှိခဲ့ဖူးတာမှ မဟုတ်တာပဲ :buu:
ဒါ Mandalay Gazette group ကို အထင်သေးတာပဲ။
MG မှာပါတဲ့ပုံကို ခွင့်ပြုချက်မယူပဲသုံးတာ MGကို မလေးစားတာနဲ့ အတူတူပဲ။
အဲဒီ မမ ဆိုတာ ဘယ်သူဘဲဖြစ်နေနေ၊ စာပေသမားမှန်ရင် ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ အလိုက်သိသိ တောင်းပန်ရမှာပေါ့။
ဒီအတိုင်း မနေ ပါနှင့် ။ သတင်းစာတိုက် ကို စာရေးပြီး တရားဝင် ကန့် ကွက် ပါ။
အခုမှ ပြန်တွေးမိတယ်.. သူခိုးက သူခိုးပါးမ၀တာ.. အဲ့ပုံလေး ကို ဒေါင်းလိုက် ကို အလျားလိုက် ပုံပြောင်းလိုက်.. ပြီးတော့.. ဖိုတိုလျော့ထဲမှာ မှန်ထဲမှာ ထင်သလို ပုံ လှည့်လိုက်.. ဘူ သိမတုန်း.. ဟော.. သွားကြားထိုးတံလေး ကို ဖျက်လက်စ နဲ့ ဖျက်ပလိုက်.. အနောက်ခံ ဘက်ဂရောင်းကို အရောင်ပြောင်းလိုက်.. ဇောက်ထိုးတွေ မှောက်ခုံတွေ ပြင်လိုက် ပြောင်းလိုက်ရင် အိုးးးး ကွက်တိပဲ.. ဘယ်သူမှတောင် သိမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ ဒိတ်ဖျက်ဖို့ ဖိုတိုရှော့တောင် သုံးထားရတာ.. ဒါလေးတောင် မတတ်ဘူးး.. ခံပေါ့ကွာ..
အဲလိုလုပ်ရင်.. သာမန်အားဖြင့် ..Fair use ထဲအကြုံးဝင်သွားတာမို့.. မူပိုင်ခွင့်နဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူး.နော..
အဲဒီလောက်လုပ်လိုက်ရင်တော့.. မူရင်းပိုင်ရှင်လည်း ဘာမှမသိနိုင်တော့ဘူးပေါ့လေ..
ပြောရရင်.. အိုဘားမားရဲ့.. ကမ္ဘာကျော် Hope ပိုစတာက မူရင်းဓာတ်ပုံကနေ.. အဲလိုဂရပ်ဖစ်နဲ့ Shepard Fairey ကပြန်ဆွဲတာ..
မူရင်းဓာတ်ပုံပိုင်ရှင်က.. သိပြီး.. ပြဿနာဖြစ်ဖူးတယ်..
In January 2009, after Obama had won the election, Fairey’s mixed-media stenciled portrait version of the image was acquired by the Smithsonian Institution for its National Portrait Gallery. Later in January 2009, the photograph on which Fairey based the poster was revealed: an April 2006 shot by former Associated Press freelance photographer Mannie Garcia. In response to claims by the Associated Press for compensation, Fairey sued foradeclaratory judgment that his poster wasafair use of the original photograph. The parties settled out of court in January 2011, with details of the settlement remaining confidential.
မတောင်းပန်ရင် တရားစွဲပြီး လျော်ကြေးပါတောင်းသင့်တယ်ဗျ
ကိုယ်က ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ တင်ပြီး ရှယ်ထားတာမှ မဟုတ်တာ
ဂေဇက်မှာ ဆောင်းပါးအဖြစ် (အခကြေးငွေမယူဘဲ) ရေးတင်ထားတာပဲ..
သူက သတင်းနှင့်ဓာတ်ပုံဆိုပြီး အခယူလုပ်စားတာ
ဒါ အညွန့်ခူးစားတာ.. ဦးနှောက်ဖောက်စားတာ..
အော် ဆူးရယ် သူခိုးအားပေး…
ဖွဘုတ်မှာ ဒီသတင်း ရှယ်လိုက်ပြီနော်
ဂျူးမလည်း ရှယ်လိုက်ပါပြီဗျာ ….
– ဟေး ရွာထဲမှာ သူခိုးမိလို့တဲ့ဟေ့။
– ဟုတ်လား ဘယ်အိမ်ဝင်ခိုးတာလဲ ဘယ်ကလဲ ဘယ်သူလဲ ဘာပါသွားလဲ၊
– ပစ္စည်းကောပြန်ရတာလား အခုဘယ်မှာလဲ၊ ဘာပါသွားသေးလဲ၊
– ရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံခိုးတာတဲ့ ၊
– တစ်ယောက်က သွားကြားထိုးတံလေး သက်သေဆိုပြီ အတည်ပြုဆိုဘဲ
– ဒါဆို အဲဒီသူခိုးဘယ်မှာလဲ မှတ်လောက်အောင်ဆုံးမကွ
– ချကွ ဆော်ပလိုက်
– မင်းလားကွသူခိုး ဒို့ရွာထဲဒါမျိုးလာမလုပ်နဲ့ ကဲ ကွာ
– အင်းကွာ မှတ်ပလား
– ဒီအတိုင်း မလွှတ်လိုက်နဲ့ စခန်းခေါ်ပြီး တိုင်ချက်ဖွင့်လိုက်
– ဟုတ်တယ် ဒါမှ နောက်လူမလုပ်ရဲမှာ
– ဟာ သွားတိုင်တော့ ရုံးသွားဘာသွားနဲ့ အလုပ်ရှုပ်တာပေါ့
– ခင်ဗျားတို့ အဲလို အလုပ်ရှုပ်တယ်ဆိုပြီးငြိမ်ခံနေရင် နောင် ဒီထက်ပိုဆိုးမှာပေါ့၊ အခုထဲက ချိုးနှိမ်ထာလေဗျာ။
– ကဲ ကာယကံရှင်ကြီးဘယ်လိုလုပ်မလဲ သူကြီးဆီပို့မလား၊ စခန်းသွားတိုင်ပေးရမလား?
( ကျွန်တော်တို့ ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဒီလိုဘဲရှိတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဒီလိုဘဲရှိတယ်……. အရင်လွှမ်းမိုးသီချင်းပေါ့)
ကျွန်တော်တို့ရွာထဲမှာ ဒီလိုလည်းရှိတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ ရွာထဲမှာ ဒီလိုဘဲရှိတယ်….. ပေါ့.. မအိရယ်။
သတင်းစာတိုက်ကို တရားဝင် ကန့်ကွက်လို့ရပါတယ်။
ဟုတ်ပ..ဓါတ်ပုံကတကယ်ကြီးကူးထားတာပဲကိုး… မူရင်းနဲ့သတင်းစာကပုံကို အပေါ်ကြည့်လိုက်/အောက်ကြည့်လိုက်နဲ့ တော်တော်မူးသွားတယ်
သွားကြားထိုးတံကိုတော့ ဖျက်ဖို့မေ့သွားတယ်ထင်ပ.. နော်
ဒီလိုပဲဖြစ်တတ်ပါတယ် — အမ မအိရယ် ..ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါ
ခုလောက်ဆို ကူးယူသူလဲ တော်တော်လေးမလုံမလဲဖြစ်နေရောပေါ့ ( သိသွားလို့လေ )
ကူညီရန်အသင့်ပါ…ဆိုလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သူကြီးရေ…
သမီးကြီး၊သမီးငယ် အမှုဖြစ်လို့ မှန်၏ မှား၏ သိပေမယ့်
ဘယ်ဘက်လိုက်ရမှန်းမသိ ရပ်ကွက်ထဲ အရှက်ကွဲတဲ့ မိဘလို ဖြစ်မှာစိုးလို့ပါ…
မထင်ရပေမယ့် မပြေးသော် ကာရန်ရှိ ဆိုသလို ကြောင့်ပါနော်…
ရွာသူ ရွာသားတို့ရဲ့ သဘောထားတွေ အရ တိုင်ပါဆိုသူ
ဘက်ကအားသာနေပါတယ်…တစ်ကယ်လဲ တိုင်သင့်တဲ့ ကိစ္စပါ…
ဒါမှ..နောက်နောင် သူများအခင်း ကိုဝင်မရိတ်ရဲမှာ…
Comment တွေအတွက်လဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…
မန်းဂဇက်မှာ တင်ထားတဲ့ ပို့စ်ကနေ ကူးသွားတာမို့
မန်းဂဇက်ရဲ့ စာဖတ်သူ သို့မဟုတ် မန်ဘာဝင် ဖြစ်နေမလားလို့လဲ တွေးမိပြန်ပါတယ်…
တိုင်တောမိလို့ မန်ဘာဝင်ဖြစ်ခဲ့ရင် မန်းဂဇက်ဂုဏ်သိက္ခာ ထိခိုက်ပါလိမ့်မယ်…
မန်းဂဇက်မှာဘဲ ပို့စ်တင်လို့ မလုပ်သင့်ကြောင်း သတိပေးလိုက်တာပါ…
ဖတ်မိလို့ အသိလေးရှိသွားရင် ကျေနပ်ပါပြီ…
သူအသုံးလိုလို့ ခွင့်ပြုချက်မတောင်းမိဘဲ ယူသွားဖြစ်ခဲ့တဲ့ အရာပေါ်မှာ အခုလိုတွေးပေးလိုက်တာလေးကို
တကယ်တော့ ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပြီးရွာထဲမှ အများကြည့်စေချင်လို့တင်ကြတယ်၊
တစ်ချို့လည်း ကြည့်ပြီးကူးသွားပြီနော် ဓာတ်ပုံလေးကိုကြိုက်လို့ ကူးယူမယ်နော် မန်ဘာဝင်တွေက ကွန်မန့်လေးတွေနဲ့ ပြောပေမယ့်၊ မန်ဘာဝင်မဟုတ်တဲ့ စာဖတ်ပရိတ်သတ် ဒုနဲ့ဒေး ဒီဆိုဒ်မှာရှိနေပါတယ်။
သူတို့က ခွင့်တောင်းချင်ပေမယ့် ဘယ်လိုခွင့်တောင်းရမလဲ? ဒါလေးပါ။
ပိုင်ရှင်ရှိတဲ. အကြောင်းတော. အသိပေးလိုက်ပေါ. ဟုတ်ဘူးလား…..
လူတစ်ယောက်ရဲ့အဆင့်အတန်းကို ကိုယ့်သတ်မှတ်ချက်နဲ့ ကောက်ချက်ချ သရုပ်ဖော်သွားတယ်လို့ ခံစားမိပါတယ်။စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်လို့ ကြွေးကြော်ထားတဲ့ မီဒီယာတွေထဲက နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာကြီးတစ်စောင်မှာ ဖြစ်သွားခဲ့တာကတော့ ရုပ်ဆိုးလွန်းပါတယ်။မူပိုင်ခွင့်ဆိုတာကိုနောက်မှာထားဦး…ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံရဲ့အခြေခံ သီလ(၅) ပါးထဲက သူတစ်ပါးပစ္စည်းမခိုးရ ဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်ကို ချိုးဖောက်လိုက်တာပါပဲ။ပြောင်းလဲချင်ပါတယ်…ပြောင်းလဲသင့်ပါတယ်…လို့ ဘယ်လောက် တောင်းဆို၊တောင်းဆို လူတိုင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာ ရိုးသားဖြောင့်မှန်မှုမရှိမှတော့ ရှေ့ဆက်သွားဖို့ ဘယ်ကခွန်အားတွေ လှမ်းကြရမှာလဲ လို့ တွေးမိရင်း……….
လစ်ရင် လုပ်တယ်လေ.. မိရင် ဆောရီးပေါ့ …အန်တီအိရေ .. ဒါမှ မဟုတ်လည်း အရူးကွက်နင်းပြီး မသိချင်ယောင်ဆောင်နေချင်နေလိမ့်မယ် … ။
အခကြေးငွေယူပြီးရေးတဲ့ သတင်း ၊ ဆောင်းပါးတွေမှာ … ပြီးလျှင် ပြီးရော ယူသုံးဆွဲသုံးနေတာတွေ အားကြီးဆိုးတယ် ။
ပန်နိမ်းပြောင်းမှ ဖြစ်တော့မယ် ထင်တယ်။
သူတပါးရိုက်ထားတာကို ကူးသုံးချင်ရင်လည်း ခရက်ဒစ်လေးလောက်တော့ ပေးအုံးမှပေ့ါ။
ခုတော့ သူများရိုက်ထားတဲ့ပုံကို ကိုယ်ရိုက်ထားသလိုလို လုပ်တာမျိုးတော့ လုံးဝ လုံးဝ အားမပေး ရှုတ်ချပါကြောင်းးးးး
(နာမည်ချင်းဆင်နေလို့ ပိုလို့တောင် ရှုတ်ချချင်သေးတယ်။) :eee:
ဒါတွေက တကယ်တော့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး
အနည်းဆုံး reference လေးတော့ ပေးသင့်တာပေါ့
facebook မှာ ဦးရဲထွဋ် Ye Htut page မှာ ဒီပို့စ်ကို သွားတင်လိုက်စေချင်ပါတယ်။
သူသိရင် လိုအပ်သလို မပျက်မကွက်ဆောင်ရွက်မယ့်သူလို့ မြင်ပါတယ်။
တိုင်တယ်လို့ သဘောမထားပဲ နောင်ဒီလို အဖြစ်တွေ မဖြစ်စေဖို့ ကြိုတင်ကာကွယ်ပေးတယ်လို့ သဘောထားပြီး အသိပေးသင့်ပါတယ်။
Charlatans Toubib ဆိုသူက သတင်းစာမှာ ကျန်းမာရေးဆောင်းပါးများဖော်ပြတဲ့အခါ ခိုင်လုံမှု မရှိတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေပါနေတာဟာ ပြည်သူတွေအတွက် အန္တရာယ်ရှိကြောင်း ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ ဒီလိုထောက်ပြတာ နှစ်ကြိမ်ရှိပါပြီ။
အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုသတင်းစာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့က အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုသတင်းစာ အဖြစ် အသွင်ကူးပြောင်းရေးကို စတင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများလိုက်နာဖို့ ရေးဆွဲ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ လုပ်ငန…်းဆောင်ရွက်ပုံစည်းမျဉ်း ( Code of Conduct) မှာ ဆေးပညာသတင်းများ နဲ့ပတ်သက်ပြီး အခုလို ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။
— ဆေးဝါးသစ်များ၊ကုသနည်းသစ်များကို ဖော်ပြရာ၌ ကြီးစွာသတိထားရမည်။ ဆေးဝါးသစ်နှင့် ကုထုံးသစ်များသည် စာဖတ်သူများအတွက် မှားယွင်းသောမျှော်လင့်ချက်များ၊ သို့မဟုတ် စိုးရိမ် ထိတ်လန့်မှုများဖြစ်ပေါ်စေတတ်သည်ကို အလေးထားဂရုပြုရမည်။ ဖော်ပြခြင်းမပြုမီ ကျွမ်းကျင် နားလည်သူများ၏ အကြံဥာဏ်ကို ရယူရမည်။ —
Charlatans Toubib ထောက်ပြတဲဆောင်းပါးနှစ်ခုလုံးမှာ တာဝန်ရှိသူစာတည်းများအနေနဲ့ အထက်ပါ ကျင့်ဝတ်ကို လိုက်နာမှုအားနည်းခဲ့တာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက် ပြုပြင်ဆောင်ရွက်သွား ဖို့ ဇန် ၁၆ ရက်နေ့က စာတည်းအဖွဲ့များကို ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ သတင်းနဲ့ စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းက ဆွေးနွေးမှာကြားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
အကြံပြုထောက်ပြသူအပြင် ကျန်စာဖတ်ပရိသတ်များလည်း သိရှိနိုင်ရန်နဲ့ နောင် အားနည်းချက်
များ၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့ စာနယ်ဇင်းကျင့်ဝတ်၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပုံစည်းမျဉ်းများနဲ့ ကွဲလွဲ တာများ ရှိရင် ဝိုင်းဝန်းအကြံပေးနိုင်ရန်အတွက် ဒီနေရာကနေ ဖော်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။See More
အဲဒါ ဆေးလောကစကားဝိုင်း FB page မှာ ဝေဖန်ကြတာတွေပါ။
သူခိုးအားပေးလက်ခံအလင်း လို့ 
မြန်မာပြည်မှာ Copyright ဆိုတာသိဖို့ ဒါလဲ ပညာပေးနည်းတစ်မျိုး လို့ တွေးပြီး သိအောင်တော့ တနည်းနည်းနဲ့ လုပ်သင့်ပါတယ်။
ဒါမှ မသိသူ လဲ သိသွားအောင်ပေါ့။
ပုံထဲက မက်မန်းသီးကြည့်ပြီး စားချင်သွားပြန်တယ်။ :-)
မ မန့် တာလည်း ကြာပြီမို့ မန့် လိုက်ပါဦးမယ်…
ပို့ စ်ပိုင်ရှင်နဲ့ တကွ ရွာသူားတို့ ရေ.. ဒီပို့ စ်ဖတ်ပြီးတဲ့ အချိန်မှာ ကျနော် Google > images > Search မှာ မြန်မာလို မက်မန်းသီး လို့ ရိုက်တဲ့အခါ အပေါ်က မအိရဲ့ မက်မန်းသီးပန်းကန်ပုံ ကိုတွေ့ သဗျ.. ဆိုတော့ကာ မမ(လားရှိုး) အနေနဲ့ မက်မန်းသီးပုံကို အင်တာနက်ကနေ အလွယ်တကူယူလိုက်ပုံရတယ်.. ဂေဇက်ဆိုက်ကနေ တမင်ယူထားတယ်လို့ ကျနော် မထင်ဘူး.. ဓါတ်ပုံကို ကိုယ်တိုင် မရိုက်ခဲ့ရင်တော့ မမ(လားရှိုး)အနေနဲ့အချို့ အချို့ သောသူတွေ လုပ်သလို ဓါတ်ပုံ အင်တာနက်လို့ တော့ရေးသင့်သဗျ..
မက်မန်းသီးပန်းကန်ပုံတင်မဟုတ်၊ အခြားမအိရိုက်ထားသော မက်မန်းပင်များ အပါအ၀င် ညီမတို့ လေးယောက်ပုံ ကို မက်မန်းသီးခူးကြသူများ ဆိုပီးတောင် တွေ့ရတယ်…
အဲဒီကနေ ကူးယူထားတာ.. အဲဒီပုံတွေမှာ ရိုက်ထားတဲ့နေ့စွဲတွေတောင် ပါတယ်…..
သြော်… ဖစ်ရမယ်ကွယ်……… :hee:
ဒါပေမဲ့ မန်းဂဇတ် ဆိုဒ်မှ share တဲ့….
ဟုတ်ပ.. ကျနော်တို့ တွေလည်း တခါတလေ အင်တာနက်က ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပုံတွေကို အဲ့နည်းနဲ့ ရှာကြည့်ဖြစ်တယ်.. စောစောက မွန်ကစ်ပြောမှ ဘေးမှာ Website for this image ကို သတိထားမိတာ.. လင်ခ့်ကတော့ မန်းဂေဇက်ပါတဲ့.. အများအားဖြင့် ပုံတွေ အင်တာနက်ကနေယူကြတဲ့အခါ Website for this image ကို သတိမထားမိကြဘူး.. အဲ့တော့ စိတ်တော့နည်းနည်းလျှော့လိုက်ပါ မအိရေ… မွန်ကစ်ပြောမှ Website for this image ကို သတိထားမိတယ်.. ကျေးဇူးပါ
မွန်မွန်လည်း ဖွဘုတ်မှာ ရှယ်ပလိုက်ပီ…
အော်.. copyright!!!! အဲ့ law လည်း မြန်မြန်လေး ထွက်လာပါတော့…
မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာကတော့ စံပါဘဲ ဆိုသလို မမှားရမနေနိုင်ထင်ရဲ့…
မနေ့က ထီပေါက်စဉ် နံပါတ်လွဲရိုက်မိတာ အမှန်ပြင်ဖတ်ပါဆိုပြီး ပါလာပြန်တယ်…
သတင်းစာကနေ ထီတိုက်လို့ ပေါက်တယ်ဆိုပြီးဝမ်းသာနေတဲ့သူတွေတော့ ခက်ရချေနော်…
တနေ့ကသတင်းစာမှာ ဟဲဟိုးက လမ်းပေါ်မှာ လေယာဉ်တိုက်လို့ သေဆုံးတဲ့သူပုံကို
KIA ကမိုင်းခွဲလို့ သေဆုံးသူပုံပါဆိုပြီးထည့်မိလို့ သတင်းစဉ်ကနေ တောင်းပန်ပါတယ် ဆိုတော့ ၀တ်မှုန်လေးပြောသလိုဘဲ ပြောလိုက်ပါ့မယ်…
သတင်းစာတွေကတော့ အလွဲလွဲ အချော်ချော် တွေ ဖြစ်နေကြပါ
သတင်းစာတိုက်ကို ဖုံးနဲ့ ဆက်ပြီး ပြောတာမျိုး လုပ်ဘူးပါတယ်
နောက်ပိုင်းတော့ ပြန်ကြားရေး ဒုဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ် ရဲ့ fasebook ( http://www.facebook.com/ye.htut.988) မှာ ၀င်ပြီး သွားပြောဖြစ်တယ်
အန်တီပဒုမ္မာ ပြောသလို ဆေးကိစ္စတွေ ဆိုင်ကယ် ကိစ္စတွေကို တရားဝင် တောင်းပန်တယ် ပြင်ပေးတယ် ၊ ဘာ မှ မဟုတ်ပါဘူး ဆိုပြီး လွှတ်ထားပေးလဲ ရပေမဲ့ အခုလို ပြောတာဟာ သူ တို့ကို ကူညီရာ ရောက်သလို ကိုယ့်အတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ သတင်းစာ တစ်စောင်ဖြစ်အောင် လုပ်တာမို့လို့ ဦးရဲထွဋ် facebook မှာ တော့ သွားပြောသင့်ပါတယ်
ကျွန်တော် ၀င်ပြောပေး မလို့ စဉ်းစားကြည့်ပေမဲ ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ပြောရင် ပိုကောင်းမှာမို့
မအိ ကိုယ်တိုင် ပြောစေချင်ပါတယ်
အင်တာနက်ကနေ ကူး…ကူး…ထားတာတွေ များ..များ နေပြီ စာတွေကော ပုံတွေကော ဒါ..ဒါ ပေမဲ့
ဘယ်site ကကူးထားမှန်း မမှတ်မိတော့ပါ လိုတဲ့ အခါ လိုသလိုပြင်..ပြင်..ပြီး ယူသုံးမိ ပါတယ်….
နောက်ဆိုသေချာမှတ်ထားပြီး ..တင်မှဖြစ်တော့မယ် …..
(အဲစကားမစပ်) အဲဒီ မက်မန်းသီး တွေ က တစ်ပုံးမှ 1600 ပဲရတယ် ၁ ပင်ကို ၂ ပုံး ၃ ပုံးလောက်သီးတယ်
အိမ်ပြန်ရောက်ရင် ဓာတ်ပုံအများကြီး ရိုက်ပြီး တင်ပေးမယ်နော်…ခြံထဲမှာ ၅ ပင်ရှိတယ် အသီးသီးရင်လှပ
ဒါပေမဲ့ ခူးရတာမချောင်ပါ အပင်ကိုလှုပ်ရမ်း ပြီး အသီးကိုခါချရတယ် အောက်မှာဖျာခင်းထား တယ် ခေါင်းပေါ်ကိုတော့ တဒေါင်ဒေါင်ပဲ ခူးပြီးရင် ခေါင်းတွေကျိန်းနေတာပဲ